Soo dejisan Avast Mobile Security 5.8.1 – Android – Vessoft
AndroidAmnigaAntivirusesAvast Mobile Security
Bogga rasmiga ah: Avast Mobile Security
Wikipedia: Avast Mobile Security
Avast Mobile Security – software ah ilaalinta cakiran ee nidaamka ka fayrusyada kala duwan iyo furin. Avast Mobile Security hubinayaa codsiyada ku rakiban iyo nuxurka xasuusta of qalab loogu talagalay handadaad kala duwan leh ay u qaadidda ku xiga. Adda ogaadaa xadgudub ku ah sirta macluumaadka iyo awood u quful ay nidaamka xogta. Avast Mobile Security ka kooban yahay qaybo inay xaddido helitaanka codsiyada in ay internet-ka ku siinaya difaac ah qalab ka hanjabaado network. In hadii la xado ee telefoonka gacanta, software ah u saamaxaaya in ay ula socdaan oo quful si ay qalabka. Avast Mobile Security sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad si ay ula socdaan mugga gaadiidka iyo maamulo codsiyada of nidaamka.
Ilaalinta nidaamka ka fayrusyada iyo furin
Settings ee hababka scan
Kartida ay xakameyn wacay oo SMS
Blocks ay helaan xogta nidaamka
Maareynta codsiyada ku rakiban
Soo dejisan Avast Mobile Security
Faallo ku saabsan Avast Mobile Security
Avast Mobile Security Xirfadaha la xiriira
Ciyaaryahanka caanka ah inuu u ciyaaro badan oo qaabab video ee tayo sare leh. Software ka furmay fursadaha ballaaran si astaysto inta lagu jiro daawashada ah ee video files.